Iflethi okanye indlu ekwicomplex ekwicomplex ek - I-Airbnb
Iflethi okanye indlu ekwicomplex ekwicomplex ek
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguSea
I-duplex entsha etofotofo, ekwenye yezona ndawo zintle neziqaqambileyo zesixeko, kwimizuzu eyi-5 kude nolwandle. I-doublelex inamagumbi okulala ayi-2 kunye negumbi eliyi-1 kwaye ingentla kweevenkile, iivenkile zokutyela, iibhari, izithuthi zikawonke-wonke. Xa sicelile sinokubonelela ngazo zonke izinto ezisetyenziswa ekhitshini ukwenzela abagcini be-kosher. Iflethi okanye indlu ekwicomplex ingaqeshiswa kwigumbi elinye okanye yonke i-balcony terrace ungabuka ii-sunrises ezintle kunye ne-sunsets.
Ukongezelela, ungafumana kwimiqamelo yeflethi,iitawuli, iiduvethi sinebhokisi yokhuseleko. Ikhitshi linento yonke, iflethi inento yonke kwigumbi ngalinye negumbi lokuhlala elineflat-screen TV, i-cable TV eneenkqubo zamazwe ngamazwe nezesizwe, umatshini okhupha umoya obandayo okanye oshushu, umatshini wokuhlamba impahla, ifriji, into yokupheka, iimbiza, izitya, izinto zokuhombisa, i-perpendicular steam iron.
Kukho indawo yokupaka esimahla esitratweni.
Yonke imihla yomtshato ukususela ekuseni , ngemizuzu eyi-10 ihamba kufutshane nendawo oyibonayo, yenziwa yimarike esesitratweni egcwele imibala, kwindawo enkulu yokupaka iimoto zaseLido Beach, apho abathengisi bebonelela ngeempahla zabo kumawaka abathengi abatyeleleyo.
Ayikho kude nayo yiLachish Park enemifanekiso eqingqiweyo, kunye ne-promenade, iquka i-zoo kunye nepaki yezemidlalo eyingozi ebalungele bonke ubudala.
Kwindawo yaseMarina unokuziqhelanisa nemidlalo emininzi efana: ne-windsurfing, i-kite surfing, izikhephe zokuqhuba isikhephe, ukuhamba ngesikhephe, ukuntywila simahla, ukuloba, ukutyibiliza emanzini Ukutyibilika ekhephini.
Umbuki zindwendwe ngu- Sea
Singaqhagamshelana nawe ngefowuni okanye nge-imeyile.
Iilwimi: English, עברית, Русский
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Ashdod